Jaamacadda Muqdisho oo xus iyo xusuus u samaysay marxuum Prof. Cali Xasan Maxamed – Balcad.com Teyteyleey
Machadka daraasaadka soomaalida (ISOS) ee hoos taga Jaamacadda Muqdisho ayaa qabtay madal xus & xusuus loogu samaynayay prof. Cali Xasan Maxamed oo ahaa guddoomiye kuxigeenkii jaamacadda muqdisho kana mid ahaa aas aasayaashii Jaamacadda Muqdisho.
ugu horayn waxaa taariikh nololeedkii iyo waxqabadkiisa soo bandhigay agaasimaha machadka ISOS ustaada Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ku tilmaamay inuu marxuumku ahaa waadigii aqoonta iyo barbaariyaha bulshada noloshiisa inta ugu badnaydna lagu xusuusan doono kaalintii uu kulahaa waxbarashada dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxaa isna goobta kahadlay Eng. Cabdullaahi Cali Xasan oo ahaa curadkii awlaada uu dhalay marxuumka isagoo ugu horayn umahadceliyay Jaamacadda Muqdisho oo siqiimo badan umaamuustay.
“Waxyaabaaha aan ku xusuusan karo waxaa ka mid ahaa inuu ahaa shaqsi madaala ah hawl karna ahaa jaclayna in dadka Soomaaliyeed wax labaro lana gaarsiiyo aqoon aad usaraysa”
“Waxaan xusuustaa in aan Jaamacaddii Ummada isagoo hormuud ka ah midkamid ah kuliyadaha anigana aan kaaliye profosoor ka ahaa dadkana ay nadhihi jirayn wiil iyo aabihii isla goob kawada shaqeeya” ayuu yiri Eng. Cabdullaahi Cali Xasan.
Waxaa qadka Skype-ka isna kalimadiisa kaga jeediyay goddoomiyihii hore ee Jaamacadda Muqdisho Prof. Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar.
“Noloshiisa waxa uu kudhisay run qofkastana waxa uu ku qiimayn jiray shaqo iyo hadal yari, waxa uu ahaa nin uruursan sharaf badan shaqana badan” ayuu yiri guddoomiyihii hore Jaamacada Muqdisho prof. Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar.
Waxaa sidoo kale isna dhanka qadka Skype-ka kaga qayb galay danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kuwayt mudane Cabdiqaadir Amiin oo ay isku meel wax kusoo barteen marxuumka ayaa ku tilmaamay inuu ahaa shaqsiyaadka wax wayn utaray dalkiisa iyo dadkiisa waxaana lagu xusuustaa kaalinta uu kulahaa dhanka waxbarashada wuxuu ahaa shaqsi qaran aadna loo jecel yahay shaki igama jiro inuu yahay barbaariye dhab ah oo bulshada Soomaaliyeed ugu qornaan doono qalbiyadooda.
Ugu dambayn waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal Cali ayaa yiri “prof. Cali Xasan Maxamed waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa qof cilmi waxayaabaha lagu xusuusan karo oo aan marna quluubta shacabka Soomaaliyeed ka bixi doonin ayaa ah inuusan ka qayb qaadanin dhibaatooyinkii dadka kadhacaayay dagaaladii sokeeye balse dhib bay ku haysay sii socoshada dhibaatada, waxaan kaga dayan karnaa ilaalinta shaqada, waxa kale uu ahaa ilaaliyaha waqtiga, waxaan ku xusuusan doonaa samirkiisii faraha badnaa. waxyaabaha uu jaclaa waxaa kamid ahaa sedex waxyaabood oo kala ah ilaalinta sharafta, balanta, iyo dal jacayl. waxaan halkan kabalan qaadaynaa inaan daabici doono kitaabihiisii iyo meel kamid ah xarumaha Jaamacada oo lagu magac dari doono.” ayuu yiri goddoomiya Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal.
Munaasabadii xus & xusuus waxay kusoo idlaatay jawi wanaagsan.